Manidina ambonin'ny Kit
Izahay dia matihanina amin'ny tsara mpanamboatra ekipa, izay mahay sy za-draharaha amin'ny R & D, ny varotra sy ny fanohanana ara-teknika.
Isika azo ISO-9001: 2015 toetra rafitra fitantanana ny taratasy fanamarinana, koa no efa tanteraka eo amin'ny famokarana mifehy dingana sy ny kalitaon'ny manampahaizana filana ara-nofo.
Teo ambanin'ny toe-javatra manokana, mifototra amin'ny vokatra famolavolana sy ny fampandrosoana, avo-fampisehoana vokatra fampandrosoana haingana sy ny orinasa mpamokatra entana fifaninanana fahombiazana hihaona mila mpividy.
"Ny mpanjifa marina foana", dia mametraka ny mpanjifa sy ny kalitaon'ny asa ao amin'ny foibe.
Eastrong Lighting Co., Ltd. dia mpanamboatra jiro LED maoderina fampidirana amin'ny R & D, famokarana, ny varotra sy ny asa fanompoana, izay nahazo ISO-9001: 2015 toetra rafitra fitantanana ny taratasy fanamarinana. Ny orinasa dia naorina teo an 2017, hita ao Dongguan, Guangdong Province. Amin'ny maha-manerantany LED jiro mpanamboatra, ny orinasa manana isan-karazany ny vokatra, ao anatin'izany ny: LED tontonana jiro, LED fantsona jiro, IP65 LED Tri-porofo jiro, LED esory jiro, LED fipoahana-porofo jiro, LED fanadiovana jiro, LED germicidal jiro, LED jiro vonjy taitra, LED UV jiro, jiro LED valin-drihana, helo-drano avo-jiro, jiro helo-drano avo lavitra jiro sy ny fitaovana vokatra.
APPLICATION FARITRY NY
IP65 Tri-porofo fahazavana
-Kalitao avo Panel Light
Tianao ve ny Hahafantatra ny farany fironana, fanavaozana sy fisaorana momba ny jiro LED orinasa? Raha izany no izy, masìna ianao, tandremo ny hifantoka amin'ny Eastrong Lighting, dia mbola hamoaka ny vaovao rehetra tokony ho fantatrao momba ny LED sy ny ara-barotra & orinasa jiro. Jereo ny vaovao farany etsy ambany:
Hot Products - Sitemap - DIEM Mobile Hitany Linear Light , Aluminum Hitany Linear Lighting , Avo Bay Light mpanandratra, Office Led Linear Light, Ufo High Bay 200 Watt, Circular High Bay Light,